Ny cellules for quails - izay sela tsara kokoa, fitaovana ary famokarana
Cages ho an'ny papelika - ahoana no fomba tsara indrindra hanamboarana sela?
Ny tranonkala cellphone ho an'ny papelika dia ilaina ao anatin'ireo toeram-pambolena izay atolotr'izy ireo vorona toy izany. Ireo vorona ireo dia kely, noho izany dia ny fikolokoloana azy ireo dia misy fepetra tsy maintsy atao izay ilaina amin'ny fanatanterahana trano. Avy eo dia hahatsapa ho mendrika kokoa ilay vorona, tsy dia marary ary mivoatra tsara.
Ny cellules amin'ny fitazonana ny papelika
Rehefa mitombo ny vorona, mila miantoka ny hazavana sy ny hafanana ampy izy ireo, ny sakafo mahasalama ary ny tokantrano miadana. Zava-dehibe ny mahafantatra hoe inona ny sela dia ilaina amin'ny papelika, ny haben'izy ireo sy ny fitaovana famokarana, izay ny vahaolana ankapobeny amin'ny fambolena biby fiompy. Ny vorona dia tena mahery fihetsika ary, mba hahazoana atody vaovao avy amin'izany, dia zava-dehibe ny mividy na manamboatra trano misy anao manokana. Ho an'ny sokajin-taona rehetra dia mila fialofana manokana ianao, any amin'ny faritany mitokana:
pikany hatramin'ny 10 andro ka hatramin'ny iray volana;
manangom-bolo, manolotra atody latabatra.
Inona no sela tsara kokoa amin'ny papelika?
Ny vorona toy izany dia tena mahatsapa ho manintona ivelany. Ny haino aman-jery, ny feo maranitra, ny hazavana ary ny drafitra dia misy fiantraikany ratsy amin'ny vokatra aterany. Rehefa mifidy trano iray dia zava-dehibe ny mitadidy ireo antony ireo, ny safidy mifidy tsara tsy ny habeny ihany, fa koa ny fametrahana. Ny cellules ho an'ny papango mitombo dia vita avy amin'ny fitaovana isan-karazany: plywood, boaty kely, metaly vita amin'ny metaly, na plastika. Fanitsiana ny votoatin'ireo vorona ireo:
Ny trano dia tsara indrindra amin'ny fitaovana matanjaka - boards, plywood, galvanized. Tokony ho mora ampiasaina sy hosasana mora. Ny rindrina eo an-damosiny, izay misy ny vilia fanaingoana sy ny sakafo fantsom-bokatra, dia tokony hodiovina amin'ny sela telo-dimanjato, mba hahafahan'ireo biby miala amin'ny lohany. Any ambany no misy ranom-boasary.
Ny trano ho an'ny tanora ao anatin'ny 10 andro ka hatramin'ny 1 volana dia manana toerana maromaro, misaraka amin'ny fantsona fanamafisam-peo. Izy ireo dia manana fitaovana fisotroana fisotroana ary fitaovana fanasitranana hafanana.
Ny toky dia mipetraka ao amin'ny trano misy tsipika ambany amin'ny 10 ° C. Avy any ivelany, misy koban-davenona voahodina, izay ametrahana ny atody. Tokony ho 10 santimetatra izy io.
Toe-ponenana ao anaty tranom-borona
Zava-dehibe ny mahafantatra hoe ohatrinona ny papelika azo atao ao anaty tranokely iray. Izany dia vokatry ny famokarana ny andian'omby. Amin'ny fampifanarahan-trano rehetra, tsy maintsy ampifanaraka amin'ireo mari-pamantarana ny vorona mpirenireny:
Ny fitsipika nomena dia 70-120 ny lohataona 1 metatra.
Ny tombam-bidin'ny famokarana amin'ny famokarana atody dia misy loha 70 isam-bolana. Ao an-trano iray dia tsy tokony hisy papelika mihoatra ny 25-30, fa ny lahy iray dia mila vavy 4-5.
Amin'ny famokarana atody fihinanana, ny fihenan'ny tendro dia 115-120 vorona eo amin'ny 1 m 2 eo ambanin'ny tany. Amin'io tranga io, ny vehivavy dia voatahiry tsy misy lehilahy.
Vovonan'ny sela ho an'ny papelika
Ny vorona dia tsy maintsy manana halava ara-teknika:
haavon'ny cellule - 170-240 mm;
lalina - 600 mm;
misotro toaka - ho an'ny mpihinam-bolo 10 ho lohalaharana;
Fanolorana fiara - ho an'ny lohan'ny 25 mm;
Dimension de feeder: width 50 mm, bord extern - 80 mm, inner - 50 mm.
Ny fitaovana misy sela ho an'ny papelika
Ny tranon'io tranon-jaza io dia misy hazo na zoro amin'ny tongotra, eo anoloana sy eo amin'ny tany misy rakotra vy. Mba hampifaliana azy amin'ny gorodona, mila mamolavola ny tongotra avo 15-30 cm ianao na miasa ny trano ho toy ny lanjan'ny batterie maromaro. Drafitr'ilay tranokely ho an'ny papelika:
ny atody manangona vilany;
ny faran'ny efitra;
pallet ho an'ny fanangonana fako sy fako.
Fonenana ho an'ny vorona dia fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovam-piterahana, fisotroana vilia, fanamainana. Amin'ny fototra sy ho an'ny tranokala, dia tsara ny mampiasa metaly tsy matavy, DSP na plywood. Ny rafi-pisotroana dia tokony tsy ho tapaka, ny feeder mba hampihenana ny fahaverezan'ny sakafo. Mba hahazoana antoka fa tsy mianjera ny atody mihodina amin'ny tsipika manify, dia misy etona misy sakany miakatra hatramin'ny 10 santimetatra amin'ny ety ivelany misy fefy iray.
Toeram-piterahana tokana ho an'ny papelika
Ho an'ny papelika matotra iray, ny mari-pahaizana mety amin'ny +18 - 25 2 C, na amin'ny hafanana amin'ny +16 2 C, ny vehivavy dia afaka manakana ny atody. Ao amin'ny vazivazin'ny vorona very ao anaty antontam-bato, miakatra ny iray ary mety ho faty. Ny trano misy papelika mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka dia tokony ho eo am-pelatanan'ny fanamainana ivelany - fatana, herinaratra na hafa. Raha tsy eo izy dia mila kalesy ririnina amin'ny papelika ianao, misy fitaovana maoderina vita amin'ny hazo. Amin'ny fampiasana solika, ampiasaina ny jiro fampiratiana, ny thermostat dia hanampy amin'ny fanamoriana ny toe-javatra tena tsara indrindra.
Net ho an'ny cellules quail
Ny ambany indrindra amin'ny trano volom-borona dia vita amin'ny tambazotra tsara, ka izany no mahatonga ny fako sy ny vorona misamboaravoara, ary ny vorona dia mandeha amim-pahatokisana, tsy misy loza mety hanimba ny tongony. Ny vodiny toy izany dia manampy amin'ny fanadiovana haingana sy haingana ny sela. Ny votoatin'ny fitaovana dia mifototra amin'ny hoe ny olona amin'ny taona tokony hapetraka ao amin'ny trano fiompiana. Kilalao ho an'ny papelika - inona no habetsahan'ny sela hisafidy:
Ho an'ny fanonganam-panjakana, ny tranobe dia natsangana avy amina 10x10 mm, ny diamondra mahatratra 0,2-2 mm.
Ho an'ny vorona lehibe, ny habeny dia 16x24 mm. Ho an'ny rindrina, dia mety ny mampiasa ny haben'ny 32x48 mm.
Ho an'ireo zokiolona olon-dehibe, mba hahazoana hena, ilaina ny famiratra tsara ny trano, ka ny rindrina dia vita avy ao anaty ala. Ny cellules dia atao eo ambany fomban-drazana, mba hahafahan'ny papelika miha-mihetsika sy mihabetsaka kokoa.
Ahoana ny fomba hanamboarana tranom-borona ho an'ny papelika?
Ny fananganana tranom-borona ho an'ny papelika dia mora amin'ny tanany manokana. Izany dia eo ambany fahefan'ny tompon-trano, fitaovam-piadiana kely. Fametrahana tranom-borona ho an'ny papelika:
Mialà eo amin'ny sisin-davenona sy ny rindrina.
Miaraka amin'ny fanampian'ny hamonoana hazo sy ny fanitsiana tsotra, ny mesh dia mihodina ary mandray ny endriky ny kibay.
Misy fametrahana ala misy alika ambany miaraka amorom-patana eo ambanin'ny hantsana.
Ny tapany eo anoloan'ilay sela dia tokony ho voatery mamono ny atody.
Ny varavarana dia mifototra amin'ny endriny.
Ao amin'ny profesion'ny galvanisma, afaka manamboatra fefiloha ianao ary manamboatra sipa mpitrandraka ao anaty tranokala.
Cane Corso - toetra
Olon'ny fikarakarana biby any anaty alika
Pekingese - manoritsoritra ny masomboly
Manondraka trondro ho an'ny bitro
Inona no hikarakarana akorandriaka ao amin'ny akvarium?
Dresses - loha lamaody 2014
Ny menaka fanadiovana vehivavy Jean Paul Gaultier
Mameno ny laisoa
Ahoana no fomba hangatahana lehilahy?
Alex Rodriguez dia nilaza tamin'i Ellen Degeneres "dikan-teny" hafa momba ny mampiaraka amin'i Jennifer Lopez
Nahoana no nofinofy ny hanambady?
Trano hazo amin'ny tanana manokana
Tom Hardy dia manenina ny fanekena ny maha-henjana azy
Inona no ambioka mety ho an'ny wallpaper maitso?
Fety iray amin'ny endrik'i James Bond
Fampakaram-bady mariazy Armonia
Loko volomparasy - ririnina-ririnina 2016-2017
Sandals amin'ny vatomamy 2013
Voan'ny aretim-po voaozona